Ọzụzụ Ọdụdọ - Jiangsu Runau Eletrọniki Manufacturing Co., Ltd.
Nnukwu ikike na-emegharị ihe na Thyristor na Ọzụzụ Eletriki
Rectifier eletrik ụgbọ oloko: dị ka otu ụgbọ okporo ígwè-DC, ọ bụ ụgbọ okporo ígwè AC na-ejikarị eme ihe. Na ụgbọ oloko eletriki na-agbazi, AC nke nwere nnukwu voltage AC na kọntaktị kọntaktị na-agbadata site na traction transformer na mbụ, mgbe ahụ a na-agbanwe AC na-eme otu n'ime DC site na ngwaọrụ ndozi nke mejupụtara ihe mmezi silicon ma ọ bụ thyristor , ma nye ya moto traction. Mee njikwa oge na ntanetị iji gbanwee volta edozi iji gbanwee ọsọ ụgbọ oloko.
Otu-adọ commutator moto electric ụgbọ okporo: a makwaara dị ka ụgbọ okporo ígwè AC na-aga n'ihu, a na-etinye moto traction commutator traction. Ike AC dị elu na netwọk kọntaktị ga-ebelata volta ahụ site na onye ntụgharị ahụ, wee nye ya moto traction ozugbo.
AC-DC-AC ụgbọ okporo ígwè: makwaara dị ka ụgbọ oloko otu-ụzọ-atọ. A na-ebu ụzọ gbadata ike AC dị elu na netwọk kọntaktị ma dozie ya site na traction transformer, dị otú ahụ iji nọgide na-enwe DC voltaji ma ọ bụ DC ugbu a nke intermediate DC njikọ dị jụụ. Mgbe ahụ, ntụgharị ntụgharị na-agbanwe ike etiti DC ka ọ bụrụ ike AC nwere ike atọ wee nye ya mpaghara moto traktị asynchronous nke atọ ma ọ bụ usoro ntụgharị mmekọrịta nke atọ. Enwere ike idozi ike nrụpụta na ọsọ nke ụgbọ oloko ahụ site na ịdezi ugboro na voltaji nke usoro ụzọ atọ site na ngwaọrụ inverter.
Rectifier ngwaọrụ na traction substation.